गृहपृष्ठ » पत्रपत्रिका/अनलाईनहरु » प्रधानमन्त्री देउवाको बदनाम गर्न खोज्नेलाई कारबाही, के भन्छ प्रधानमन्त्री कार्यालय ?
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई बदनाम गराउन सक्रिय रहेका व्यक्तिले नक्कली फेसबुक र ट्विटरमार्फत अनेकथरि सन्देश प्रवाह गर्न थालेपछि छानबिनका लागि उजुरी परेको छ ।
सभापति देउवाले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष शपथग्रहण गरेको तस्बिर राखेर फेसबुक तथा ट्विटर आईडी सञ्चालन गर्दै आउनुभएको छ । तर प्रधानमन्त्रीको नाम राखेर सञ्चालन गरिएको नक्कली आईडीमा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको उपचार खर्चको विषयमा उल्लेख छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री खनालको उपचार खर्च तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले दिने निर्णय गरेको थियो । यसैगरी अर्को नक्कली सन्देशमा भनिएको छ, “महान् बन्ने मेरो रहर छैन तर देश र जनताप्रति जवाफदेही बन्ने उत्कट चाहना छ ।
नेपालको सिमानाभित्र बसोबास गर्ने सबै उमेर समूहका (बालबालिकादेखि वृद्धवृद्धासम्म) नेपाली वा विदेशी नागरिक वा विदेशी शरणार्थी सबका सबलाई पूरा डोज खोप नलगाइकन हामी भोट माग्न आउने छैनौँ । आयौँ भने हामीलाई भोट नहाले हुन्छ ।”
यस विषयमा सम्पर्क राख्दा मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव बद्री तिवारीले भन्नुभयो, “मैले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीबीआई)लाई लेखेर पठाइसकेको छु, अनुसन्धान भइरहेको छ ।” सचिव तिवारी भन्नुहुन्छ, “नक्कली आईडी बनाएर प्रधानमन्त्रीको बदनाम गर्ने प्रयास भएको छ ।
लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने, देशमा सुशासन कायम गरेर राम्रो काम गर्न चाहने प्रधानमन्त्रीलाई नक्कली आईडी राखेर बदनाम गर्न खोजिएको छ । देशमा सुशासन र शान्ति सुरक्षा कायम गर्न पनि नदिनेहरूको यो चालबाजी हो ।”
तर सीबीआईका प्रवक्ता श्यामकुमार महतोले अहिलेसम्म कुनै लिखित उजुरी प्राप्त भइनसकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “उजुरी प्राप्त भएको छैन, शनिबार भएर प्राप्त नभएको होला, आइतबार प्राप्त हुने छ ।” हाल सामाजिक सञ्जालको सदुपयोग गर्नेभन्दा पनि दुरुपयोग गर्ने पनि देखिन थालेका छन् ।
यसलाई रोक्न चुस्त सरकारी संयन्त्रको खाँचो पर्दछ । देशको कार्यकारी प्रमुखको नै नक्कली आईडी बनाउनेविरुद्ध अनुसन्धान सुरु गर्न सीबीआईलाई लिखित उजुरी नै चाहिने हो भने सर्वसाधारणको के हालत होला ? भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ । आजको गोरखापत्रमा खबर छ ।